Condres OS: yazvino distro yegore komputa chizvarwa | Linux Vakapindwa muropa
Inogadzirisa OS iri yemazuva ano uye inonzwisisika kugoverwa kweGNU / Linux, vane vavaki vakafunga zvese kuti zviite nyore kushandisa sezvinobvira, zviwanikwe uye zvine dhizaini yakanaka Uye zvakare, ivo vakaedza kudzikisira njodzi dzekuchengetedza zvakanyanya sezvinobvira kuti vawane yakachengeteka kwazvo sisitimu yekushandisa. Uye kana iwe uchifarira iyi distro, isu tinoita kuti zvive nyore uye isu tinokupa iwe chinongedzo kwaunogona kuwana rumwe ruzivo uye kurodha pasi kubva ku webhusaiti yepamutemo yeprojekti.
Mune dzimwe nzira ndizvo zvakafanana neApricity OS. Uye inogona kuve yakanaka kutsiva yeavo ese ma distros anga achinonoka uye kunonoka neyakagadziriswa nyowani. Uye zvakare, maererano nekushandisika, inopa maitiro akafanana kune mamwe mapurojekiti anozivikanwa seZorin OS, Linux Mint, nezvimwewo, uye zvakare inowedzera zvibvumirano nemamwe mapurojekiti anoitsigira seWine neIC.
Sezvandataura zvakafanana mupfungwa iyi neApricity OS, ngatirangarirei kuti yakasiiwa muna Chivabvu 2017. Naizvozvo, kune avo vese vakaitwa nherera nechiitiko ichocho, pamwe vanogona kutangazve chiitiko icho neCondres OS. Yeuka kuti Apricity yakapa akatiwandei mafafitera ne Sinamoni uye GNOME kune avo vanosarudza nharaunda-senge Mac, senge nekuti ivo vaimbove vashandisi veApple system kana nekuda kwekuti ivo vanofarira iro dhizaini zvakanyanya.
Condres OS, zvakare yakavakirwa paArch Linux, seApricity, uye ine ICE uye Waini sezvatakataura. Yekutanga yekubatanidzwa zvirinani negore uye wechipiri kukwanisa kumhanyisa yemuno Microsoft Windows software paLinux. Nekudaro, ine repertoire yemapake-akaiswa mapakeji kuitira kuti iwe usade chero chinhu kana chero chinhu chekutanga kuishandisa iwe uchinge waisa iyo. Uye ini ndinopedzisa nekuzviburitsa pachena kuti, kusiyana neArch, Condres yagadzira kumisikidza uye kushandisa nyore, saka haina kuitirwa chete vashandisi vemberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Condres OS: yazvino distro yeiyo gore komputa chizvarwa